Pee karama Manufacturers & Suppliers - China Pee kalama Factory
N'èzí Sports Portable Water kalama
Nke a bụ karama mmiri n'egwuregwu enweghị mmiri BAP-enweghị gburugburu ebe obibi, yana mgbanaka a na-ebugharị na ọnụ karama ahụ, nke dị mfe iburu.
Fitness Eco enyi na enyi elu-edu Mmiri kalama
Mpempe mmiri mmiri dị n'egwuregwu 1000ml buru ibu, nke e ji ihe dị mma na-emetụ gburugburu ebe obibi, kwesịrị ekwesị maka usoro ihe nkiri dịka ahụike, ugwu, picnics, wdg.
N'èzí Sport Water Battler Plastic
2500ml nnukwu ikike egwuregwu kalama. Na aka mkpanaka, na-erikpu ma na-adịgide adịgide. Nkpuchi mkpuchi nkpuchi, mfe imeghe. Na-enye gị ohere iji otu aka rụọ ọrụ n'oge mmega ahụ. A kwadebere n'ime ime ihe nzacha na nri, yana ihe na-enweghị mmetụ gburugburu BPA na-enye gị ohere ichedo okike mgbe ị nọ nso okike.
Clear Mmiri kalama BPA Free
Ma ọ bụ ndụ kwa ụbọchị, njem obodo, njem ezumike ma ọ bụ egwuregwu n'èzí. Unu niile nwere mkpa hydration kwa ụbọchị, yabụ ngwa ngwa ọ idealụ drinkingụ dị ezigbo mkpa. Ike zuru oke nke 1500ml, njikwa aka, nnukwu oghere maka njuju na nhicha dị mfe. Mmiri karama dị otú ahụ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na nhọrọ kacha mma.
Egwuregwu Plastic Water Bottle
Ahụ mara mma ma dị gịrịgịrị, ike gwụrụ nke 1500 ml, mmiri na-amịpụta mmiri nke enwere ike ịwepụta maka ị drinkingụ ihe ọ andụ ,ụ, yana ihe mkpuchi silicone jikọtara na okpu karama. Ihe omuma nile a gha eme ka odi nma maka mmega gi. Ma ọ na-agba ọsọ, ịgba ígwè, ịrị ugwu, ma ọ bụ njem. Inwere ike iji otu aka rụọ ya ma jupụta mmiri n’oge ọbụla.